पिता बन्दैछन् कपिल शर्मा ? - Glamorous Icon
Home›GIcon News›पिता बन्दैछन् कपिल शर्मा ?
भारतका चर्चित कमेडियन कपिल शर्माले ६ महिना अगाडि बिबाह गरेका थिए । उनले गिन्नीे चतरथसँग प्रेम बिबाह गरेका थिए । कपिलको बिबाहमा बलिउडका निकै चर्चित सेलिब्रेटीहरु शुभकामना दिन बिबाह भोजसम्म पुगेका थिए ।
यस्तैमा, अहिले कपिल पिता बन्न लागेको समचारहरु निकै आइरहेको छ । भारतिय मिडियालाई आधार मान्ने हो भने कपिलको श्रीमती गिन्नी गर्भवती छिन् । कपिलको परिवार पनि घरुमा नयाँ सदस्यलाई स्वागत गर्न तयार छन् । तर, आफू पिता बन्न लागेको विषयमा कपिलले केही बोलेका छैनन् ।
कपिल अहिले ‘द कपिल शर्मा शो’मा व्यस्त छन् । उनको यस शो टिआरपीमा शर्ष स्थानमा नै छ । कपिलले हालै वर्ल्ड बुक अफ रेकर्डमा सबै भन्दा बढि हेरिने स्ट्यान्ड अप कमेडियनको कीर्तिमान राखेका छन् ।
लहानमा पहिलो पटक फेसन शो तथा म्युजिकल ...